Opensource Archives - Page2of5- Saturngod
Posted on Updated April 29, 2010 by saturngod
ရန်ကုန်မှာတုန်းက မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ MySQL က မြန်မာနိုင်ငံကနေ download ချခွင့်မရှိလို့ပါ။ SUN က သူ့ product တွေကို အဲတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို download ချခွင့်မပေးထားဘူး။ အခုတော့ oracle လက်အောက် ရောက်သွားပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။ MySQL Workbench version4တုန်းက သုံးဖူးသေးတယ်။ အဲတုန်းကတော့ သုံးရတာ တော်တော်လက်ပေါက်ကပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းမသိဘူး။ သုံးလို့ကို မကောင်းဘူးဖြစ်နေတာ။ အခုတလောတော့ MySQL Workbench နဲ့ တော်တော်အဆင်ပြေနေတယ်။ Database Design ကို MySQL အတွက်ဆွဲရင် MySQL Workbench က တော်တော်လေးကို မိုက်တယ်။ Index တွေကော Foreign Key တွေကော အကုန် လုပ်လို့ရတယ်။ […]
Posted on Updated December 6, 2009 by saturngod
The Sushi, what??? Sushi, huh? isaprogram that allows downloading all the packages needed to install the programs you want on GNU/Linux without an Internet connection on your own computer. Sushi, huh? is designed for people, which for example can not afford monthly Internet connection. As installing software on GNU/Linux isahard and […]
Posted on Updated November 24, 2009 by saturngod
http://en.saturngod.net/small-talk-with-thet-twe-aung ခဏနေမှပဲ မြန်မာလို ပြန်တော့မယ်။ fb မှာ ပြောတဲ့အတိုင်း ကူးပြီး တင်လိုက်တာ။
တော်တော်ကောင်းတဲ့ ပွဲပဲ။ လူကတော့ အများကြီးတော့ မလာဘူး။ iPhone နဲက Google Android အကြောင်းတော့ ကောင်းကောင်းလေး သိလိုက်ရတယ်။ နောက်ပြီး opengap ဆိုတာလေးပါ အဆစ်သိလိုက်ရတာ တန်သွားတယ်။ လုပ်တဲ့နေရာကတော့ Singapore Microsoft Office မှာပါ။ NTUC 22 ထပ်မှာ လုပ်တာပါ။ ရယ်တော့ရယ်ရတယ်နော်။ iPhone နဲ့ Google Android ပြိုင်တာ Microsoft Office ရုံးမှာဆိုတော့။ Microsoft ကလည်း သူတို့ product အသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်သွားပါတယ်။ Website Spark အကြောင်းပြောသွားတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ MS က မသက်ဆိုင်တော့ သလိုဖြစ်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့ site ကိုသွားပြီး မစမ်းရသေးဘူး။ company […]